Britney Spears, atariishada, heesaha
Britney Spears, magaca buuxaBritney Jean Spears(* 2 December 1981 McComb, Mississippi, USA) waa muusikada caanka ah ee Maraykanka, Grammy Ginner iyo MTV Video Music Awards, heesaha iyo actress. Waxaa ugu fiicnaa tan loogu magac daray "Baby One Time More Time", "Oops! ... Waxaan Qabtay Mar labaad", "Toxic", "Gimme More", "Womanizer", "Hold Me Again" "Ilaa Dhamaan Dunida Dhamaan", adigoo martiqaadaya heesta "Scream & Shout" oo uu ku leeyahay rikoodhka Maraykanku will.i.ama ama isagoo heesaya filimka Smurfs 2.
Waxa uu bilaabay sidii television yar ee Mouse New Mickey ee Club, shan sano ka dib dhamaadka barnaamijka ee 1998 bilaabay xirfadiisa hees ku Solo ah.
Guulaheedii waxaa soo jiidatay shirkado xayaysiin ah, oo loo yaqaan 'Pepsi', iyada oo soo saartay filimkeeda 'Crossroads movie' iyo xaqiiqadeeda waxay muujinaysaa Britney & Kevin: Chaotic. Afar sano waxay ku jirtay sheeko Justin Timberlake. 2004, waxay guursadeen Kevin Federlin, oo saddex sano ka dib la guursaday, iyo laba wiil oo Sean Preston iyo Jayden James (2005, 2006). Bishii Janaayo 2013 waxay la jejebisay Jason Trawick, laakiin bil gudaheed waxay bilawday inay dadweynaha la wadaagto saaxiib cusub, 4 sannado yar yar oo ah David Lucad. Dhamaadkii Diseembar 2013 waxa ay bilowdey laba sano oo ka mid ah hawlaha Las Vegas.
Waxay ku dhalatay McComb, Mississippi, laakiin waxay ku koray Kentwood, Lousiana. Aabaheed, James Parnell Spears, waa dhisaha iyo hooyada Lynne Irene Bridges, macalin dugsi hoose. Waxa uu leeyahay laba walaalo, walaalkiis Bryan (wuxuu dhashay 1977), oo u shaqeeya mid ka mid ah maamulayaasheeda, iyo walaashiis Jamie Lynn (oo dhashay 1991).
Waxay ku tartartay jimnoolajiyada, waxay ku guuleysatay tartamo kala duwan. Waxay ka shaqeysay bandhiga qoob-ka-cayaarka deegaanka. Markii ay siddeed jir ahayd, wadaadkii kaniisadda Baptist ee degaanka ah ayaa ku taliyey in ay u tartanto Club Mouse. Inkastoo ay weli aad u yar tahay, wakiil New York ayaa ogaaday. Waxay markaas ka qaybgashay dugsi qoob-ka-ciyaarka ee New York waxayna ka shaqeeyeen telefishinka dhawr xayeysiis aan ganacsi ahayn.
Later waxaa la dhigey Mickey Mouse Club waxaana ka shaqeynay 1993-1994. Waxay la kulantay farshaxanno hore sida Justin Timberlake, Joshua Chasez, Keri Russell, Christina Aguilera, ama Ryan Gosling.
1997-2000 Bilow Shaqo: Qandaraas la leh diiwaanada Jive, ...Ilmaha Hal mar Wakhti dheeraad ahsi ay uHaraaga ...! Mar labaad ayaan sameeyay
1997, Britney waxay saxiixday Records Jive ka dib markii ay dhegaysatay demo daboolka "Marwalba Waligay Lahaa", asal ahaan waxaa heesay Whitney Houston, oo ay u dirtay. Ka dib markii ay saxiixday heshiiska, Britney waxay si tartiib ah u bilaabatay isku diyaarinta inay ku duubto albaabka oo ay balaariso qaylada codkeeda iyada oo loo marayo macalinka dhawaaqa. Dhanka kale, iyadu waxay diiwaangelisay dhowr farsamo oo la sii daayay CDs ama Oops ...! Tartanka ugu horeeya wuxuu noqday heesaha cinwaankiisu yahay... Ilmaha Hal mar More, oo bilaabay inay ka muuqdaan saldhigyada raadiyaha iyo MTV ee 1998. Waxay wali wali qaali noqotey oo dhar xidhnaa dharka dugsiga. Sheekadu waxay ku guulaysatay dhammaan aduunka oo dhan. Jaantusyada jaantusyada ma aha oo keliya Maraykanka, laakiin sidoo kale Australia iyo UK. Albaabka magac isku mid ah wuxuu ahaa Kanada iyo Maraykanka oo ku yaala dusha sare ee jaantusyada muddo lix todobaad ah. Hal sano gudaheeda waxay noqotay dhalinyarta ugu guulaha badan taariikhda. Alba... Ilmaha Hal mar Morewaxaa lagu iibiyey adduunka oo dhan iyada oo loo marayo 35 million qeybo.
Bishii Abriil, 1999 waxay gaartay bogga hore ee majaladdaRolling Stone.Sawirada ay soo bandhigtay sida lolita soo dhaweynta maadaama ay leeyihiin naaso ka weyn intii lagu talaalay, iyaga oo sheegaayay qashinka lagu sameeyay qalliinka caamka ah ee la filayay in ay qaataan kahor intaan la daaweyn cajalad fiidiyoow ahMararka qaarkood. Xaqiiqooyinkan lama xaqiijin.
Albaabka... Ilmaha Hal mar MoreWaxay heshay abaalmarino badan waxayna ku jirtay ra'yiururinAbaalmarinta Billboard Music Music 1999sanadka la doortay sannadka.Bishii Disembar, waxay heshay afar Billboard Music Awards, Abaalmarinta Muyuusiga Mareykanka, iyo ugu dambayntii, 2000 waxay heshay laba abaalmarin Grammy bishii Febraayo.
Ka dib markii la dhammeeyay socdaalka loo yaqaanCrazy 2K Tourwuxuu sii daayay CD labaad oo cinwaankeedu yahayHooyooyinka! ... Waxan QabtayWaxay isla markiiba heshay jaantuska sare ee meel kasta oo adduunka ah. Kaliya todobaadkii ugu horreeyay ee Mareykanka ayaa buugan ka iibiyay wax ka badan 1,3 million, waxaana uu noqday kan ugu dhaqsiyaha badan ee muusikada ah ee heesaha oo dhan.Sanadkan gudihiisa 2000 ee Maraykanka iibin a total 10 million unugyada ee sidayaal UK 900 000 iyo Germany 1,2 million. AlbaHooyooyinka! ... Waxan Qabtaywaxaa lagu iibiyey aduunka iyada oo loo marayo unugyada 24 million.
2000, iyada iyo hooyadeed ayaa daabacay buugii ugu horreeyay, kaas oo lagu daabacay cinwaankeennaWadnaha ilaa qalbiga. Waxay ku guuleysatey dhowr MTV Awards, halkaas oo ay bilawday inay ka hadasho waxqabadkeeda, taas oo ay hadda labbistay.Qeybta labaad waxay ka heshay laba magacyada Grammy ee ugu Fiican albaabka Pop iyo ugu Fiican Musharaxiinta.
2001-2003Britney, Crossroads aAagga
Britney Spears Oo Isha Ku Haysa Dacwada Music (NFL Kickoff Live 2003)
Bilowgii sanadka, 2001 waxay saxiixday qandaraas xayeysiis ah oo leh Pepsi, taas oo 8 heshay malaayiin doolar.Waxay daabacday buugeeda labaad oo cinwaankeedu ahaaHadiyadda hooyadawaxayna mar kale xiiseyneysaa waxqabadkeeda MTV Video Music Awards, heeso dhar la kariyey, oo dhaleeceeyay PETA.
Bishii Nofeembar, waxay sii daeysay albaabkeeda saddexaad, si fudud loo yaqaanBritney. Toddobaadka ugu horreeya, waxay ka iibisay wax ka badan 746 000.Inkasta oo ay ka badnaayeen 4 million ee Mareykanka lagu iibiyay, waxay ahayd wax aad u weyn marka loo eego labada koowaad ee guddiyada.Albaabka ayaa ah kan ugu horreeyay ee ahaa qoraaga iyo soo saaraha.Albums caalami ahBritneyiibiyey 15 million pieces.
Bishii Febraayo 2002 waxay tagtay filimkii koowaad ee cinwaankii uu ku ciyaaray, loo yaqaanCrossroads, kaas oo ahaa isbuucii ugu horeeyay ka dib markii uu soo galay kaalinta labaad, ka dibna wuxuu hoos u dhacay hoos u dhac. In filimka, heesaha laga soo qaaday albaabkaBritney. Dhamaadkii, filimka ayaa lagu dhaleeceeyay dadka dhaleeceeyay, xitaa waxay heleen dahab dahab ah oo loogu talagalay haweenka ugu caansan Madonna. Filimku wuxuu sidoo kale ku guuleystay Roobkii Dahabiga ahaa ee loogu talagalay filimkii ugu xumaa ee filimka,Anigu ma ahi gabadh, ma ahan dumar, taas oo ay heshay.
Xidhiidhka afarta sano ah ee lala yeeshay Justin Timberlake ayaa dhammaaday bishii 2002. Qaybinta ayaa si ballaaran loo soo bandhigay iyada oo inta badan lagu eedeeyay gaalnimo.Saameyntu waxay kacday markii Timberlake uu sii daayay heesoCry me and River, halkaas oo ay ka sheekeyneyso gaalnimadeeda lammaanaha. Spears ka faallooday:"Waxay ahayd laba sano oo xidhiidh ah, waan hubaa inuu ahaa isagu, kan saxda ah, laakiin waan qaldamay."
Bishii Juun, 2002 wuxuu furay makhaayadda NYLA ee magaalada New York, laakiin waxa uu xiray guuldaradii sanad kadib. Inkasta oo dad badani ay kufaraxsan yihiin in saameynteeda ay ku yeelatay adduunka muusikada ay hoos u dhacday, waxay ahayd albaabBritneyoo lagu magacaabay Award Grammy. Sanadkan 2003 waxaa lagu dhawaaqay majaladdaForbescaanka ah ee sanadka.Munaasabadda muusikada, 2003 waxay ku laabatay XNUMX bishii Agoosto markii lagu abaalmariyay abaalmarinta MTV Video Music Awards, iyada oo kaashaneysa Madonna iyo Christina Aguilera. Isagoo kaashanaya Aguilera, Madonna ayaa caan ku noqotayLike Virgin ah. Hawlgalku wuxuu ku soo booday xannibaadda, sida ay Madonna u dhunkatay.
Bishii Nofembar, 2003 waxay sii daatay albaabka afraad ee loo yaqaan 'studio album'Aagga. Max Martin wuxuu ka caawiyay sawirada mudo dheer, laakiin sidoo kale waxaa caawiyay dad caan ah sida Moby ama R. Kelly. Albaabada oo dhan (13 Songs) waxaa markii ugu horeysay lagu qoray qoraal ahaan. Albaabka ayaa mar kale ku jira shaashadda albaabka Maraykanka, dib u qorista taariikhda muusikada - dhammaan albaabbadii ugu horeysay.Toddobaadkii ugu horreeyay, ayaa unugyada 609 000 lagu iibiyey, oo ka badan malaayiin 3 oo lagu iibiyey Maraykanka. Wakhti dheer ka dib, waxay haysatay heesaa sare 10 ee shaxanka muusikada Mareykanka, oo ah hees la yiraahdo Toxic, oo iyadu heshay Abaalmarinta Grammy ee ugu horeysay.AlbaAaggaaduunka oo dhan ayaa iibiyey wax ka badan 10 million pieces.
Qeybta saddexaad ee albaabka ayaa sidoo kale aad u guuleysatayAaggaoo leh magacaWakhti kasta. Ka dib markii la sii daayay gabaygan, waxay tagtay safar caalami ah oo la yiraahdoHotel Onyx Tour, kaas oo arkay wax ka badan taageerayaasha 600 000 waxayna kasbatay 34 million dollars. Bandhiga ayaa ka dhacay Waqooyiga Ameerika iyo sidoo kale Yurub, halkaas oo ay ku dhammaystirtay, sababtoo ah jilibkeedii waxaa la dhaawacay hal usbuuc kahor bilawga dalxiis markii uu toogtay heesoDibad bax.
3. Janaayo 2004 wuxuu guursaday Jason Allan Alexander wiilkiisa caruurnimada. Arooska ayaa ka dhacay qol yar oo ku taal Las Vegas. Waxay xirtay dharka iyo baseball cap. Dadaalka qoyskeeda iyo maareeyaha ayaa ahaa guurka 5. Janaayo waa la joojiyay. Waxay qaadatay wadarta saacadaha 55. Codsiga ah in la mamnuuco, ayay sheegtay in ayan ogeyn xaaladda dhabta ah ee jirta iyo in ay ahayd kaliya kaftan oo ka soo gudubtay xadka. Ma lahan wax hiwaayad ah oo ay la wadaagaan Alexandre, mana filayn karto in lala wadaago qoyskiisa isaga oo leh caruur ama caruur. Ugu dambeyntii waxay ku tiri bandhig talefishin:"Si daacadnimo ah, waxaan doonayay inaan ogaado waxa ay u egtahay in la isguursado."
Bishii Luulyo, 2004 ayaa ku dhawaaqday xiriirka iyo qoob ka ciyaarka Kevin Federlin seddex bilood ka dib markii uu ku biiray kooxda Hollywood. Ma aysan fahmin fahamka tan iyo markii Federline ku guursaday actress Shar Jackson waxaana lahaa labo caruur ah. Weli, Federlin habeenkii 18. Sebtembar 2004 ayaa joojiyay.
2004-2006 Guur, ilmo kowaad iyoHits ugu weyn
Qeybta labaad ee sanadka, 2004 waxay ku dhawaaqday joojinta xirfad miyir-beeleed sababtoo ah hooyada.Xaqiijinta guurka ka dib Federlin, ayay u sheegtay joornaalkaDadka "Waxaan rabaa in aan noqdo hooyo da 'yar, sannadka soo socda waxaan noqon doonaa 23 waxaana doonayaa inaan hooyadey".Hase yeeshee, warshadaha leh "Britney" waxay ku baxday September iyo September 2004 waxay bixisay cadarkii ugu horreeyay ee curad ah. Ka dib sanad iib ah, 100 waxay kasbatay malaayiin doolar waxayna noqotey foornada ugu iibinta badan.
Uruurinta ugu horreysa ee la soo bandhigayHits ugu weyn: My Prerogativela soo saaray dhamaadka sanadka 2004. Albaabka ayaa ka soo baxay kaalinta afraad ee liiska ku yaal Maraykanka (iibka hooseeya waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay dhiirigelin la'aan).Toddobaadkii ugu horreeyay, albumska Mareykanka ayaa ka iibiyay wax ka badan 255 000. In UK, 115 000 ayaa la iibiyey todobaadkii ugu horreeyay, oo ka sarreeya iibinta isku midka ah fanaaniinta sida Madonna, Shania Twain, ama Whitney Houston. Saddex kaligood oo cusub ayaa u muuqday xulashada, iyo kuwo kaleMy Prerogativesi ay uSamee Somethin '. Albaabadu waxay ugu dambeyntii adduunka ku iibiyeen 8 million.
Intii lagu guda jiray 2005, waxay muujisay muuqaal dhab ah ninkeedaBritney & Kevin: Qiyaano. Dhaleeceyntu, si kastaba ha ahaatee, waxay joojisay iyada oo aan kali aheyn, iyo dhagaystayaashu ma ahayn sidii la filayay.
Uurka ayaa laga soo sheegey af-hayeenkiisa April April 2005,bishan, ayaa isbitaal la dhigay isbitaalka. Waxay mar dambe ku qancisay majaladdaDadka:"Wax yar baan dhiigbaxayay, waa inaan si joogto ah u kormeeraa."Inkasta oo ay xiiseeyneyso, cunuggu wuxuu qirtay majaladda kaleElle "Waxaan tagayaa qalliinka Caesarean, ma garanayo sababta, laakiin waxaan ka baqayaa xanuunka."14. Sebtember 2005 iyo wiilkeeda Sean Preston waxay u dhashay Federlin. Dhalashadu waxay ahayd in la ordo ilaa maalinta xigta, laakiin foosha ayaa horey u timid. Ninkeeda ayaa gacmaheeda gacanta qabtay intii ay shaqeynaysay. Later, waxaa loo wareejiyay Wip Maternity Ward ee Santa Monica.
Ka dib dhalashada ilmo kowaad, xirfadeeda muusigga ma aysan dhicin wax cusub. Gurigeeda ayaa daabacday albaabka laga soo dirayB ee isku darka: Remixesiyo bishii Febraayo 2006 waxay soo saartey cadar cusub oo lagu magacaabo In Control.
In May 2006 dhawaaqay uurka labaad, iyadu si cad u hadlay wararka ku saabsan burburkii dhaw uu guurka, taas oo la diido, iyo sidoo kale xaqiijiyay in album cusub, taageerayaasha sidoo kale arki doonaa markii ugu horeysay muddo hal sano ah.12. September 2006 waxay dhashay wiilkeeda labaad, Jayden James. In ka yar laba bilood kadib markuu dhasho, wuxuu waydiistay furriin sababtoo ah khilaafaadka aan caqli-gal ahayn ee isla markaana isla markaasna waydiistay haynta labada carruur.
2006-2007 Furiinka amugdiga
26. 2007, ninkeeda, Sandra Bridges Covington, ayaa u dhintay kansar.16. Feebarwari todobaadyo ka dib markii la cambaareeyay paparazzi, xafladaha duurjoogta ah iyo cabitaanka khamrigu waxay go'aansadeen in ay qaataan daaweynta maandooriyaha. Saacadaha 24 kuma dhicin xitaa isbitaalkaiyo habeenkii soo socda waxay u muuqatay in saladh lagu qurxiyo Malibu, halkaas oo ay diiday inay timaha xiirto. Taasi waa sababta ay u qaadatay maqaskii is-qabsiga waxayna is-gooysay. Kadibna waxay si toos ah u tageen xarunta tattoo halkaas oo ay ku lahayd tattoo. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ay tiri:"Ha i taaban. Waxaan haystaa dhammaan kuwa i taabanaya oo dhan aniga igu wareegsan. "Timaha, iyada oo ay weheliso Red Bull oo aan caqli-gal ahayn, laydhka iyo maqaska ay gooyeen, waxay u muuqatay internetka iibka.
20. Bishii Febraayo, 2007 waxay go'aansatay in ay dib ugu noqoto daaweynta oo si cad u weydiisata saxafiyiinta inay ka baxaan kali ahaanna ay ixtiraamto asturnaanta. Ma dhicin iyo markii paparazzi ogaaday meesha ay degan tahay, waxay go'aansatay inay joojiso daaweynta markale. Ma aysan joogin maalinka isbitaalka.
21. Febraayo, 2007, labada carruurba waxaa loo dhiibay Kevin Federlin. Habeenkaas wuxuu ka soo muuqday gurigiisa hortiisa wuxuuna weydiiyay caruurtiisa. Ninkeeda hore ma aysan furin. Xilliga ay ogaatay in ay ku dhaleeceysay saxafiyiinta, waxay ku soo weerartay dallad.Tani waxay ahayd markii seddexaad ee daaweynta ay qaadatay, Kevin Federline waxaa la soo xiriiray maxkamad ku saabsan xanaanaynta caruurta. Garsooraha masuulka ka ahaa furitaanka ayaa maqlay in haddii uusan dhammeystirin daaweynta waqtigan iyo xaruntii dhaqancelinta ee horey u soo baxday, ma rajeynayo in caruurtu ku dhex maraan dacwada furitaanka. Xaruntu waxay ka tagtay 20 ka dib markii daaweyn lagu guulaystay. March 2007, oo bilaabay in ay naftooda u huraan carruurta iyo diyaargarawga mar kale albumka cusub.
Bishii Sebtembar 2007 wuxuu bilaabay dagaal sharci ah inuu ilaaliyo wiilasha Sean Preston iyo Jayden James. Maxkamadda ayaa amar ku bixisay in ay tijaabiso daroogooyinka iyo khamriga usbuuc kasta.Dhowr maalmood ka dib waxaa lagu eedeeyay in uu wado gaari aan lahayn liisan darawalnimo isla markaana ku hanjabay iyada oo xabsi ah.Dhacdadan darteed, ninkeedii hore Kevin Federline waxaa la siiyay caruur buuxda, halka hal booqasho todobaadkii oo idil ayaa loo oggolaaday, kormeerid.
Ku dhowaad saddex sano kadib, waxay dib u soo laabatay marxaladda, markii ugu horraysay waxay noqotay 1. May 2007 ee Golaha Blues ee San Diego ayaa soo raacay shantaan kale oo ka mid ah magaalooyinka kale. Wax walba waxaa la iibiyay dhowr daqiiqadood.31. Bishii Agoosto, ayaa la sii daayay hal qofGimme Moreiyo telefishanka muusikadaMTVayaa maanta ku dhawaaqay in ay billaabi doonto Abaalmarinta MTV Video Music Awards oo keliya. Inta lagu jiro waxqabadkeeda waxay ku jirtaa ka koobanGimme Morewuxuu ciribtiray cidhibtiisa, wuxuuna ku qasbanaaday in uu xirto dhamaan cirifka jaban. Later, si kastaba ha ahaatee, waxay shaaca ka qaaday in shirkadeeda diiwaangelinta, Jive, lagu khasbay inay soo baxdo xiitaa inkastoo aysan dareensaneyn inay si buuxda ugu diyaar garoobeyso soo noqoshada. Diiwaanada Jive ayaa ballanqaaday MTV in ay qabato iyadoon ogayn wakhtigaas. Macluumaadkan ayaa waxaa u sheegay Britney P. Diddy oo ka tirsan xisbigiisa ka hor VMA.
Waxay kaloo soo bandhigtay muuqaal gebi ahaanba kala duwan oo leh jilaa caan ah Chris Angeel. Marxaladda, waa inay u muuqataa oo iska baxdaa ama dhaansato muraayadaha. Hase yeeshee maalmo yar ka hor bandhiga, si kastaba ha ahaatee, MTV yimid iyo Palms Hotel lafteeda, halkaasoo bandhigga la ciyaaray, tiradaasi aad bay khatar u ahayd, iyo bandhiggu waa inuu isbedelaa daqiiqadihii ugu dambeeyay sababo caymis.
Albaabka cusub ee cinwaankamugdigadaabacay 30. Oktoobariyo kuwa dhaleecayntu la kulmeen guusha aan la filayn, laakiin iyadu ma dhiirrigelisay albumka oo lagu aasay. Laakiin bishii Diseembar 2007 ayaa soo saartay filim cajiib ah oo cajiib ahSheyga Me, oo ku sugnaa dhinaca hore ee jaantusyada.
2008-2010:rogadka,Diiwaankaiyo socdaalThe Circus Starring: Britney Spears
Britney Spears on The Circus Starring: Britney Spears ee 2009
Bishii Jannaayo, 2008 waxaa isbitaal loo dhigay xaalad nafsaani ah markii ay caruurteeda ku haysatay gurigeeda oo ay diiday inay siiso ninkeedii hore.Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, isbitaalka ayaa ka baxay isbitaalka ka dib dhowr maalmood si uu ugu laabto Febraayo.Maxkamadda ayaa markaa amar ku bixisay xannibaadda aabbaheed, Jamie Spears.
Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii uu ka soo laabtay isbitaalka, fasax ayaa dhacay. Waxay shaqada ka eryey maamulaha, waxaana ku soo laabtay maamulaha asalka ah, Larry Rudolph, oo madaxeeda u noqday toban sano ka hor. Bishii Maarso, 2008 ayaa si lama filaan ah ku dhawaaqday in ay door ka qaadan doonto doorka ugu wanaagsan ee taxanaha MareykankaSida aan ula kulmay hooyadaa. Xilligaas ayaa ka dhigtay sheekada ugu badan ee taxanaha ah ee taxanaha oo dhan, waxaana lagu qiimeeyay kuwa ugu sareeya taariikhda 'taxane'.Sidaa darteed waxaan bilaabay inaan ka hadlo marxaladaha Spears markasta oo aan ku jiro sitcom this successcom. Dhanka kale, clip clip animated ah ayaa u timid iyada oo keliya hal saddexaadJooji Barafka.
12. May 2008 ayaa ku soo laabataySida aan ula kulmay hooyadaaiyo sida laga soo xigtay abuurayaasha taxanaha ahaa suurtogalnimada inay ku ciyaaraan xilli ciyaareedka cusub.7. Sebtembar 2008 ayaa markii saddexaad ku bilaabay barnaamijka 2008 MTV Video Music Awards. Waxay heshay abaalmarin loogu talagalay fiidiyoowga ugu wanaagsan ee dumarka, videoka ugu wanaagsan ee fiidiyowga iyo fiidiyoowga sannadka loogu talagalay heesaha heesahaSheyga Me. Dukumintiga wuxuu bilaabay inuu isku tuuro isla maalintaasBritney: Diiwaanka, taas oo ay ku soo noqotay dhacdooyinkii hore ee nolosheeda shakhsi ahaaneed.Dukumeentiga waxaa laga sii daayay 30. 2008 on MTV iyo 5,6 waxaa daawaday malaayiin dad daawadayaal ah. Dukumiintiga ka soo baxa adduunka qurxinta iyo ka baxsan. Dukumintigan waxaan baran doonaa waxa ay ka fekerayaan waxtarkooda hoose, xisbiyada, iyo haddii ay dareensanyihiin inay diyaar u yihiin inay istaagaan marxaladda hortaalla malaayiin qof. Dokumantiga lama sheegin oo kaliya iyada, laakiin sidoo kale qoyskeeda, maamulaha iyo shaqaalaha.
Qeybtii lixaad ee studio magaciisa lagu magacaaborogadkasii daayay bishii December 2008. Plate kadib soo saaristiisa kaalinta sare ee gooldhalinta iibka US oo iyana waxay noqotay artist ugu da'da yaraa ee Ugu Horeeyay shan taarikada tiro ka mid ah oo la kasbado mahad u qoro Guinness Book of Records.Waxa kaliya ee ugu horeysay, isku badbadalo, kan ka guulaystay wajiga oo ka mid ah kali gooldhalinta Maraykanka, ayaa noqday tirada ugu horeysay ee mid ka mid ah iyada mustaqbalkiisa tan iyo iyada ugu horeysay hal ... Time Baby One More ka 1999. isla sannaddaas, weli ku guuleystay abaalmarinta loogu laabto ugu weyn taariikhda iyo soo laabasho ah iyada nolosha adkaa iyo xirfado. Inkastoo furiinka, luminta fursadaha daryeelka carruurtooda iyo burburka maskaxda, iyada soo laabtay tusay xooggiisa cajiib ah. In January 2009 helay iyada amar aabbe wiil ka gees iyada tababarihii hore ee Sami Luftimu, saygaadii hore Adnan Ghalib iyo qareen Jon Eardleymu inay iyada iyo qoyskeeda iska dhow 250 yards joogo.Bishii Maarso, 2009 waxay tagtay safar caalami ah oo la yiraahdoThe Circus Starring: Britney Spears, taas oo malaayiin doolar ku heshay dakhliga 131 waxana uu tan iyo markii uu noqdey kii ugu guulaystay, uguna soo booqday uguna badanaa faa'iido leh. Xilligii la sii daayay, waxay ahayd 5. 2009 ugu safarka ugu wanaagsan, 5. safarka ugu badan ee taariikhda taariikhda ee heesayaasha iyo 18. ugu faa'iidada badan. Guusha guuleysi leh, tirada asalka ah ee riwaayadaha safarka ah ee hoos udhaca safarkiisa ayaa ka badan labanlaaban 97. Inta lagu jiro safarka 50 waxaa lagu bedelay qoob-ka-cayaaraha, jilbaha, qoryaha iyo xayawaanka. Bandhig kasta oo 200 ah waxaa ka soo qayb galay shaqaalaha 50. Tartanka guud ee 60 wuxuu ku bixiyay malaayiin doolar oo dollar ah. Qalabka lagu hayo riwaayad kasta wuxuu ahaa 34 tan oo ah walxo gaarsiisan wadar ahaan baabuurta XNUMX.
Bishii Nofembar, 2009 ayaa sii daatay albaabkeeda labaad ee hits-kii ugu weynaa ee ka horeeyay halganka3, kaas oo noqday kaalinta saddexaad ee mid ka mid ah American Billboard Hot 100.In May 2010 rasmi ah u xaqiijisay xiriirka iyada iyada wakiilka Jason Trawick, kaasoo uu kula heshiiyay joojinta iskaashiga xirfadeed, si loogu dadaalo in ay diiradda saaraan nolosha shakhsiga ah.Isla sanadkaas, heesaha ayaa soo saaray ururinta dharka ugu horeeya, iyada oo lala kaashanayo Candie.
28. Sebtembar 2010 ayaa soo bandhigtay taxanaha Fox StationGlee, taas oo iyadu sidoo kale la ciyaartay. QeybtaBritney / BrittanyTaasi waxay ahayd uun baad iyadii, wuxuu noqday a million daawadayaasha 13,3 iyo 4% ratings of dhacdo ugu daawaday ee taxanaha ah abid.
2011-2012: EraFemme Fataleiyo xeerbeegtida Mareykanka X-Factor
28. Maarso 2011 ayaa sii daatay albaab cusub, oo ah amarkii toddobaad. Waxaa loo magacaabayFemme duubista. Sheekada ka timid albaabka ayaa noqotay heesHareereheeda iga qabo.
Heesta isla markiiba soo baxay kaalinta koowaad ee Canada, Belgium, Denmark, New Zealand, laakiin sidoo kale in boor. Waxaa hore u jiray iyada afaraad hal, taas oo si dhakhso ah ay degan sare ee shaxanada iyo mahad u noqdeen artist labaad ee taariikhda, kuwaas oo maamula si ay u sii hal hogaanka on sare ee gooldhalinta dhowr jeer. Wuxuu ahaa saaxiibkii ugu horeysay artist Mariah Carey. In video for gabaygii ciyaara xiddiga pop ka bannaan in matalo on Earth in ay heleen fame. Waxa ay noqon doontaa celebrity ah, laakiin ay caan u danbeyn qarqinayo iyo wada baabbi'iyaa.
Maqaalkani wuxuu ku raaxaysan jiray sharaf weyn caalamka oo dhan. Sida laga soo xigtay dadka booqanaya bogga MTV, waxaa jira albaabo MarchFemme Fatalealbumkii ugu fiicnaa sanadka 2011.Rolling StoneMid ka mid ah majaladda ugu qiimaha iyo saameynta music yeedhay album sidii album taariikhda ugu fiican oo wuxuu u dhiibay 4 / 5, taas oo ah qiimeynta ugu wanaagsan ee waxa magazine this helay. BritishDiiwaanka Digitalwuxuu siiyey xitaa 5 / 5, taas oo ah, sida tan hore, qiimeynta ugu fiican ee abid la siiyay albaabka Britney. Albaabku wuxuu sidoo kale xusayaa xusuus qorka IngiriiskaThe Suniyo xataaPerez Hilton. Sawiro inay album this ka dib (2013) Waa fikrad laga Christina Aguilera, kuwaas oo laga duubay uu movie barta isla on kuwaas oo saddex sano ka hor la soo sawiray Britney Spears in a dhibcood polka-dhibcaha.
Dhowr usbuuc ka dib markii fannaanka tijaabada ah uu ku dhawaaqay sii deynta labaad ee uu noqdayIlaa Dhamaan Adduunka, kaas oo gabayga kesha uu sidoo kale ku lug lahaa. Waxay u sheegtay wixii iyada u waxyoonay inuu qoro sheekadan."Waxaan la rogmato sida aan, ama heesaa kale, innagu waxaynu nahay on safar caalami ah, waxaan leenahay la yaab leh, habeen sixir, mana doonayo in ay u tagaan in ay seexdaan. Waxaan jeclaan lahaa haddii la joogo in socday ilaa dhamaadka dunida "ayay ku qeexday. Fiidiyowga qoob ka ciyaarka ee Apocalyptic oo laga soo qaaday magaalooyinka miyiga ah ee ay maamusho Ray Kay, oo sameeyey qaabka 2 ee clipka.
Xilliga xagaaga waxay sii daatay dokumenterigaAnigu waxaan ahay Faleemada Femme. Dokumentiga ayaa soo socota iyada markii ay isku diyaarineyso inay sii daayaan albaabkeeda fasalka toddobaadFemme Fatale. Dukumiintiga wuxuu soo bandhigayaa muuqaalo gaar ah oo laga soo qaaday istuudiyaha si loogu daaweeyo filimkii ugu dambeeyayIlaa inta adduunku dhamaado, imtixaannada iyo, in ka badan oo dhan, tours mini ee Las Vegas.
Britney at Femme Fatale Tour
Intii lagu guda jiray safar gaaban, waxay ku dhawaaqday TV-ga in ay ku dhowdahay inay bilawdo safarkeeda cusubFemme Fatale. Ka dib tobanka tobnaad ee riwaayadaha lagu qabto, 6,2 waxay ku kacdaa malaayiin dollar ah[Ilaha].Femme Fatale Tour69 waxay kasbatay malaayiin dollar oo 11 ah. booqasho aan faa'iido doon ahayn ee 2011. Sicirada socdaalka ayaa waxaa loogu talagalay Zalda Goco, oo sidoo kale la shaqeysay Gwen Stefani ama Lady Gaga. Booqashada Femme Fatale ayaa sidoo kale lagu duubay DVD-ga iyo 3D version. Rikoorka wuxuu ka yimid Toronto, halkaas oo lagu duubay laba maalmood.
30. Agoosto 2011 ee Los Angeles habeenkii waxaa la siiyay MTV Video Music Awards. Habeenkan, 2 ayaa ku guuleystay abaalmarinta loogu talagalay heesaha ugu wanaagsan muusikada muusikadaIlaa Dhamaan Adduunka. Waxay sidoo kale ahayd abaalmarin iyada iyada iyo iyada oo sidoo kale helay Michael Jackson Video Vanguard Award sidii aqoonsiga iyada xirfad dheer iyo faa'iido leh. Wareysi uu siiyay MTV News, waxay sheegtay in ay ahayd midka xiga ee ka soo wareegay albumkaFemme Fatalewuxuu noqon doonaa heesDambiyada. Fiidiyowga keli ah ayaa sidoo kale waxaa ku ciyaaray ninkeeda Jason Trawick.
Lix sano ka dib markii la sii daayay ururinta xusuusta koowaadB In The Mix MaqsinnadaWaxay go'aansatay in ay soo saarto jadwalka oo la sii daayoB ee isku darka: Remixes Vol. 2. Waxaa asal ahaan lagu falanqeeyay in heesaha cusub iyo heeso hore loo soo bandhigay ay ka muuqan doonaan rikoodhada, laakiin dhammaadkii wax war ah laguma laheyn albaabka.
In 2012, waxay noqotay wajiga Twister Dance, oo ay ku duubtay xayeysi ay soo saartay Ray Kay. Waxay sidoo kale noqotay mid ka mid ah afarta garsoore ee version of American ee tartanka X-Factor. Waxay sidoo kale sii daysay fiyuuska cusub ee 'Fancy Twist', FOX ayaa faafisay dhacdooyin kale oo Glee ah, oo sharaf u leh Britney. Britney ayaa sidoo kale noqotay haweenayda ugu faa'iidada badnayd caalamka oo ay ka heshay 58 malaayiin doolar (aan ku jirin X Factor). Xaaladda waxaa lagu magacaabaa Britney 2.0. Taageerada Britney ma lahayn guulo badan, maaddaama ay ka muuqato nolosha Britney ee ugu xumaa. Weli, waxa ay noqotey midka ugu badan ee la daawaday 4. taxane taxane ah; daawadayaasha 7 460 000 American waxay daawadeen markii ugu horeysay. Britney ayaa sidoo kale martigelisay albumka #willpower ee heesaha American ah will.i.ama ee halQaylo iyo dhawaaqa. song Tani waxay sidoo kale ahayd #1 on iTunes dalalka 54 oo waxay noqdeen hal ugu horreysay ee abid in la dul dhigo iTunes dalal badan.
2013: Wada-hawlgal cusub,Britney Jean, Gloryiyo hawlgalka Las Vegas
Qaybtan qaybta ka mid ah maqaalkani ma aha mid si ku filan loo fahmo, sidaas darteedna waxaa ku jira macluumaadka u baahan in la xaqiijiyo.
Haddii aad la socotid mawduucan, fadlan caawi si aad u xaqiijiso sheegashooyinkan adoo ku daraya tixraacyada ilaha macquulka ah.
Magaca bandhigga Las Vegas.
Britney Spears waxay si rasmi ah u xaqiijisay 2013 bilawga sanadka in ay ka shaqeyneyso albaabada 8-aad ee studio, oo ah in isla sannadkaas la sii daayo xilliga dayrta. Kooxda Britney ayaa xaqiijisay soo saarayaasha sida Hit Boy, Elia Blake, Ina Wrolsden, Darkchild, Danja, Sia Furler iyo will.i.am. Sababtoo ah shaqadeeda ku jirta albaab cusub, waxay diiday jury-gareenta xarun kale oo ah X-Xaqiiqo American ah. Soo-saaraha LA Reid ayaa sidoo kale ka noqday ka-qaybgalka X Factor.
12. Janaayo 2013 Britney ayaa xaqiijisay fasaxii Jason Trawick, oo sannadkan la socday. Bishii Febraayo, waxaa la sii daayay fiidiyow si loo soo afjaro heesahaQaylo iyo dhawaaqa.
Dhamaadkii bishii Febraayo, Britney waxay ku biirtay xisbiga Elton John, halkaas oo ay ku timid caleemo madow oo madow. Dhamaan cajiibka ah oo dhan waxay ahayd midabka cusub ee Britney - midabka madow. Waxay sidoo kale u muuqatay in ay la socoto saaxiib cusub, afar sano oo da 'yar David Lucad, oo ah shaqaale shirkad sharci ah. Waxay la kulantay cashar golf ah, wuxuu ahaa macallin, waxayna ahayd arday. Waxay yiraahdaan waxay isla markiiba isku fiirsadeen. Muddo yar ka dib, waxaa la ogaaday in Britney ay qorsheyneyso in ay ilmo la yeelato David.
Britney waxay saxiixday qandaraas lasocod ah oo loogu talagalay ka qaybgalka Las Vegas ee Planet Hollywood, oo bilaabaysa xagaaga 2014. Heshiiska waxaa ka mid ah toddobaadyada 8 oo keliya oo sanadkiiba, taas oo micnaheedu yahay in Britney ay sanadka oo kaliya sameyso 2. Heshiiska waxaa sidoo kale ku jira in lagu daro in Britney Spears ay ka qeyb qaadan doonto xaflad ballaaran oo ku hareereysan magaalada. Bandhigga ayaa si joogto ah isu bedelaya si aysan u maqnayn xiisaha iyo tijaabooyinku bilaabmey bishii July. Britney ayaa yiri:"Runtii aad ayaan u xiiso galaa bandhigga soo socda ee Las Vegas. Bandhigyada ma fududa. Waxa ay noqon doontaa xisbi bilawga ilaa dhamaadka ah si aan u helo, waa inaan ku jiraa qaabka ugu fiican oo aan goyso buuxa. Waxaan aad ugu faraxsanahay in bandhiggu uu ku saleysan yahay tiknoolijiyada ugu dambeeya ee farshaxanka waxayna noqon doontaa runtii ugu sareysa. "Dib u dhiska Goolka Hollywood wuxuu ku kacayaa 20 hal milyan oo doolar, taas oo ku saabsan 380 million. Britney waxay iman doontaa 30 malaayiin doolar, taas oo ku dhawaad ​​580 000 000.
Bishii Abriil, Britney soo baxay iyada in cadarka iyo tobnaad Island Fantasy, distriubuovaný Yurub iyo USA, ka dibna toogtay Sawiro cusub Qaab majaladda, u muuqday in ganacsiga ah a Dodgers kooxda baseball iyo caddaysaan ka qaybgalka xafladda Congo Wango Tango, ka qeyb galay in sanadka 2011 .. Intaas waxaa sii dheer hay'adda nabadsugida duubay heesta "Ooh La La" waayo filimka Smurfs ah, kuwaas oo ka baxsaday 17. Waxaa laga yaabaa in 2013 iyo waxa suurto gal ah in muuqan on album socda Britney ee. Filimku wuxuu lahaa US Ciyaar 6. July 2013 8 iyo Czech Republic. August 2013 Britney ayaa mar kale timo cad leh.
1. May (USA April 30.), Ayaa waxaa u muuqday sawiro koowaad ee Britney madax in studio iyo ugu dambeyntii waxaa la xaqiijiyay in Britney bilaabay diiwaan songs uu cusub, album siddeedaad, taasoo, sida uu soo saare fulinta (by will.i.am) waa in aad saaxiib. Sidoo kale bilaabay in ay ka hadlaan beydkiisa eedeeyey Lady Gaga iyo Britney, laba la arkay sugan istuudiye lagu duubo isla maalintaas ah.
Bishii May Maajo 2013, Britney ayaa kaalinta labaad kaga jirta liiska dumarka ugu liita dumarka, sida laga soo xigtay majaladda Maxim. Isla mar ahaantaana, magacyada heesaha cusub ee Britney ayaa u muuqday, oo magacyadoodu saadaaliyeen albaab gaar ah. 11. May Wango Tango ayaa dhacay. Wareysi lala yeelanayo Maria Lopez, Britney waxay ka wada hadashay albaabkeeda cusub, xirfadaheeda tababarka iyo dareenka ay u leedahay shukulaatada cad. Raadinta sawirka Maryada gabar 2-sano jir ah, Britney waxay sidoo kale xoojisay in ay rabto ilmo kale, marwalba doonaya gabar yar.
17. May ayaa ka baxsaday heesaha Ooh La La ee filimka 'Smurfs 2', kaas oo ku guuleystay guusha weyn ee taageerayaasha, taas oo markii danbe lagu sawiray cajalad fiidiyoow ah oo lagu magacaabo Marc Klasfeld. Laba maalmood ka dib, VEVO waxay xaqiijisay Scream & Shout, taas oo wakhtigaasi ka soo wareegtay aragtida 220 million ee youtube.com. 27. May 2013 ayaa dhaaftay taageerayaasha Britney on 1 000 000.
Muddo yar ka dib Britney ma lahan wax macluumaad ah ama sawirro paparazzi. Taageerayaasha Britney ayaa sidoo kale waxay sheegeen in heesaha Ooh La La uu ka muuqan doono Billboard Hot 100 ka dib markii hal qaylo iyo qeylo-dhaan ah uu hoos u dhacay.
Markii Amanda Bynes ay bilaabtay inay la kulanto dhibaatooyin nafsaani ah waxayna xiirtay madaxeeda, Britney waxay si firfircoon uga caawisay inay ka soo kabato muddadan, iyada oo la wadaageysa waayo-aragnimadooda.
9. Bishii Juun, sawirkii ugu horeeyay wuxuu ka yimid duubista fiidiyoowga Ooh La La, oo uu maamulo Marc Klasfeld. Bandhigga fiidiyowga ayaa ahaa 11. July 2013. 16. Bishii Juun, Czech MTV waxaa kale oo ay habeenkii la soo baxday Britney Spears, taas oo soo bandhigtay dukumiintiga I Am The Femme Fatale, oo ay ku jiraan sanadka 2011 7. albaabada studio iyo video clip for Till The World Ends iyo TOP 20 keliyood kaliya by Britney.
Britney waxay sidoo kale noqotey Twister Dance mar labaad, waqtigan Twister Dance Rave. Isla mar ahaantaana, wada-shaqeynta la leh fanaanada Kesha ayaa mar kale la xaqiijiyay, oo ka mid ah waxyaaba kale, hal-abuurka aduunka ee dhamaystiran oo laga soo qaaday albaabka hore ee Britney's Femme Fatale. Britney Spears waxay si firfircoon ula xiriirtay taageerayaasha Twitter, iyaga oo xitaa ka sii badanaya, maadaama ay tahay mid ka mid ah xiddigaha yar yar ee sidaas sameeya. Maalintii Isniinta, heesaha Ooh La La wuxuu ku heestay raadiyaha Z100, wuxuu ciyaaray saacad kasta. Waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in 8. albaabada studio waxaa lagu sii deyn doonaa 2013.
Dhawaan ayey Britney waxay sheegtay in ay rabto in ay tagto safar caalami ah intii lagu jiray mashquulinta Las Vegas, taageerayaasha ayaa ku farxay. Silsilado ganacsi ee Maraykanka iyo Yurub, oo ay ku jiraan Czech Republic, waxay ka bilaabantay iibinta horudhaca kaliya Ooh La La, oo ahaa mid xiiso badan. Waxay sidoo kale bilowday inay ku fakarto Riwaayadda Britney iyo Rihanna oo ay iskaashi la sameeyeen 2011. Waxaa jiray warar sheegaya in Britney uur lahayd, laakiin dhammaantood way is-baddaleen. Laakiin Britney waxay qirtay inay u maleysay inay uur leedahay mar, laakiin ma aysan aheyn. Waxa uu sii kordhaya muuqaalkiisa guud ahaan David. Waxay ilmaaheeda u aqbashay inay tahay saaxiib fiican oo ay ku ciyaaraan, Britneyna waxay ahayd mid xun.
28. June Britney ayaa soo saartay fiidiyow ay ku sheegtay:"Waan jeclahay dhamaan wiilasha da 'yarta ah!"Fiidiyowkaan, Britney waxay muujisay nafteeda ku saabsan guurka khaniisnimada ee Maraykanka. Waxay markaas ku qoratay Twitter:"Aad ayaan u faraxsanaa oo waan ku faanayaa in aan maqlo xukunka."
Wakhti aad u dheer, wax khaas ah kuma dhicin, Britney ayaa si adag uga shaqeysay Alba 8. Markii ay u muuqatay in dadwaynuhu wakhti yar ka dib, waxay ahayd sheeko, qosol iyo farxad. Raadiyaha Raadiyaha ah ayaa ka gaabsaday inuu Ooh La La galo sababaha aan la garaneynin. Wax yar ka dibna waxaa mar kale lagu sawiray marwalba sidii ay u socotay albaabka dambe ee qalabka wax lagu duubo. Waxay sidoo kale ku guulaysatay doorashadii sanadka ugu fiicnayd, sida Eminem, Lady Gaga ama Beyoncé, iyo sahaminta dhacdada ugu wayn ee 2013. Iyada oo ka jawaabeysa ra'yiururintan, waxay farriin ku dirtay Twitter, taas oo ay uga mahad celisay taageerayaasha taageeradooda."Waxaan ku jiraa cadaadis weyn;). Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay markii aan kuu soo diri doonaa dhadhansiinno Dadka ay album cusub ... Ma sugi karo in aan idinla wadaago waxaan doonayaa inaan, waxa aan ka shaqeeya. Tani waxay noqon doontaa albumkayga ugu weyn ee abid - Britney ", ayay ku qortay.
Bilowgii July, William Orbit, oo ka mid ahaa soo saarayaasha Alba 8, ayaa qoray:"Will.i.am wuxuu sameeyey hal ka mid ah heesaha ugu wanaagsan uguna waaweyn ee Britney! By habka, waxay u muuqataa cajiib ah on dhammaan heesaha cusub! Waa lagu afduubayaa! "
6. July waxay gaartay Clip for Womanizer 100 000 000 oo ku taal VEVO wuxuuna noqday kan xiga ee Britney, kaas oo helay aqoonsi VEVO. Labadii hore waxay ahaayeen I Wanna Go iyo ilaa Dhamaan Dunida Dhamaan, kuwaas oo heley shahaadada dhammaadka 2012.
Bishii Luulyo, Britney waxaa sidoo kale la arkay wiilasheeda xadiiqadda qurxinta. Waxaa ilaaliyay saddex ilaaliye ilaaliye ah, dadna looma oggola inay sawirro qaadaan Britney. Ma aysan cadeyn qof walba sababta ay u ahayd.
Khamiis Khamiis. Bishii July ayaa kor u qaaday hal clip video ahOoh La La, kaas oo sidoo kale ku ciyaaray wiilashii Britney ee Sean Preston iyo Jayden James. Fiidiyowga fiidiyowga, Britney waxay helaysaa shaashad filim ahaan adoo guusha Gargamel ee magiciisa. Fiidiyowgu wuxuu horeyba ula kulmay guul. saacadaha 24, wuxuu ku guuleystay malaayiin 4, iyo 10 hal milyan views views per VEVO asbuucii. Sawirada imtixaanka kowaad ee Las Vegas ayaa u muuqday. Waxaa la xaqiijiyay in Britney runtii tahay. 18. Bishii Julaay, raadiyaha Europe2 ayaa bilaabay guuldarada kaliya Ooh La La. Dhammaadkii Luulyo, ayaa la ogaaday in Britney ay ku dhaqmi doonto 2014 Superbowl. Britney 28. Bishii Luulyo, waxay sidoo kale la tagtay wiilkeeda iyo saaxiibkeed David si uu u soo bandhigo filimka Smurf 2. Waxay labbistahay qaab kale oo ka duwan dharka midab buluug ah oo diyaar u ah inay taageeraan taageerayaasha. Kuwa kale, CD-ga laba-taxa ah ee lagu magacaabo "The Essential Britney Spears" ayaa la sii daayay.
Bogga Buzzfeed.com ayaa daabacay 70 sababta taageerayaasha ay u jecel yihiin Britney Spears wax badan.Xaaladaha qaarkood, waxay geysatay - ama taageerayaasheeda.
15. Bishii Agoosto, waxaa la xaqiijiyay in Miley Cyrus heesto hees la ah Britney Spears. Waxay bilaabeen inay ogaadaan raadadka been abuurka ah iyo macluumaad been ah oo ku saabsan albaabkeeda iyo albaabada Britney. Waxaa jiray hal shay: xilliga cusubi wuxuu noqon lahaa bam la mid ah. Waxay ahayd xilligii labaad ee xilligii Zone.
Kadib guushii niyadjabsaneyd ee bishii Luulyo ee la soo dhaafay, isbeddel cusub ayaa soo baxay Twitter;"Fadlan, Britney, badbaadi pop-muusik!"Sidoo kale, sida ay qortay bayaanka, Britney waxay runtii diyaar u tahay.
19. websiteka BritneySpears.com ayaa la soo saaray bishii August. Halkii laga heli lahaa menu, digniin ayaa ka muuqatay shaashadda: Britney Spears; Indhaha oo dhan i dul saaran; 29 maalmood. Taageerayaashu waxay bilaabeen waali iyo sidoo kale si daacad ah uga sheekeynaya waxa ku dhacaya 17. Sebtember 2013. Dhamaadkii bishii Agoosto, dhammaan shabakadaha internetka ee shabakadaha bulshada ee Britney ayaa la xajiyey. Diyaargarow xilliga cusub ayaa bilaabmay. Maalintii ugu dambaysay bishii Agoosto waxay ahayd magaca duuliyaha kaliya; Shaqada Bootka. Fiidiyowga loogu talagalay kan keliya wuxuu ahaa filim saddex maalmood ah; laga bilaabo 8. 11. Sebtembar. Sidoo kale magaca gabaygan by Miley Cyrus-SMS (Bangerz), kaas oo Britney martigelisay.
Bilowgii Sebtembar waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in Britney ay fulin doonto 17.9. on Good Morning America, maalinta dayuuradda 8 hal mar. 7. Bishii September ee Britney ayaa Twitter-kii u dirtay sawirkii ugu horreeyay ee duullimaadkii la socday ee loo yaqaan 'pilot pilot'. Waxay u egtahay mid la mid ah sheeko gaaban. Taageerayaashu waxay isla markiiba bilaabeen inay ka wada hadlaan xilliga Blackout 2.0.
9. Bishii September Britney ayaa sawir ka qaadatay bikriigeeda iyada oo shabakadeeda bulshada, taas oo lagu qaaday fasax ka dhexmuuqda filimka filimka Werk Bitch. Dunida oo dhan ayaa isla markiiba caddaynaysa in gabaladii "Britney" ay dib u soo noqotay. Taageerayaasha ayaa sidoo kale ku dooday in heesta loo yaqaanWerkBitch amaWorkBitch. will.i.am ayaa ka jawaabay jawaabo ah oo ku saabsan magaca kaliya ee khiyaamada ah, ka jawaab celiyay:"Waan jeclahay Werk Bitch. Maxaad ka heshaa? "In ka badan 60% taageerayaasha ayaa isku raacayWerk Bitch, magaca rasmiga ah ayaa waliba noqdayShaqada Bootka. Axadda 15. Sebtembar, maalinta ka horeysa premiere ee hal, ka badbaaday song demo internet. Britney this song aad halis u adag yahay sida qofna electro filayaa iyo taageerayaasha yar ka song ka tagay ... laakiin la kulmay server qiimaynta music aad u wanaagsan iyo weedha "Waxaad Betta Work jawaan" ayaa noqotay weedh caadi ahaan loo isticmaalo ka mid ah taageerayaasha Britneyinými.
1.10.2013 (2.10 in Czech Republic.) Video soo baxay todobaadkii in la arkay in ka badan dadka 20 000 000. Britney waxay ku soo laabaneysaa gabi ahaanba, waqti cusub ayaa bilaabay. movie noqday labaad ee ugu qaalisan taariikhda (taagan dollars 6 000 000, taas oo u dhiganta qiyaastii 123 000 000 CZK). Ka hor intaanan kaliya waa fiidiyoo Michael Jackson qaylo leh walaasha martida ah Janet. Waxay ahayd hal milyan oo doolar oo qaali ah. Taageerayaasha ayaa ku farxay in ay seegaan jirka Britney's faahfaahin dheeraad ah, laakiin sidoo kale in Britney ee fiidiyowga mar kale qoob ka ciyaara waqti dheer. Britney waa video aad u sexy, wuxuu isticmaalaa karbaash iyo B-Army mar kale bilaabay in ay isticmaalaan mid ka mid ah naanays badan Britneyiných - 2004-Moloney - taas oo ahayd calaamad wanaagsan. Fannaaniinta ayaa xaqiijiyay in Britney ay diiwaangelisay boodhka marxaladda fasaxa ee Jason Trawick. Bishii Oktoobar, Britney duulay UK si kor loogu qaado uu album si show radio BBC Quraac Radio1 iyo dhawr kale raadiyaha iyo TV hadal show in Alan Carr. Jimco 17.10. (maalinta bandhigga bandhigga), gudbiye jireed oo ka mid ah Shaqada Boot-ka ayaa ka muuqday Yurub.
25. Bishii Oktoobar wuxuu ahaa albaabka rasmiga ah ee albaabka Britney Jean ee kuyaal shabakadaha bulshada. Britney waxay qaawan tahay daboolka daboolka, iyo magaca albaabka waxaa lagu soo saaray wadnaha neon. Daboolka waxaa sidoo kale la ogeysiiyay 5. Bishii Nofeembar, hal mar oo loo yaqaan 'Perfume', oo ilaa waqtigaas uu ahaa maamulaha Larry Rudolph, soo saarayaasha iyo madaxweynaha RCA, ayaa ahaa mid aad u fiican. Britney waxay warqad dheer u dirtay taageerayaasheeda munaasabadda daabacaadda daboolka iyo taariikhda la sii daayay ee cusub. Waxyaabaha kale, waxay akhrisaa sida soo socota:"Waad ku mahadsantihiin inaad igu soo raacday wadadan waxaanan u ogolaanayaa inaan sameeyo waxa aan jeclahay ... Anigu ma rumaysan karo in tani ay tahay horey 8. albaabada studio iyo waxaan ogahay in aan weli sheego inuu yahay albumkeyga shakhsi ahaaneed illaa iyo hadda, laakiin waa run, runtiina waan ku faanayaa albaabkan. Sannado badan ayaan ku jirey sannadihii la soo dhaafay, waxaanay igu dhiirrigelisay inaan galo qoob ka ciyaarka oo aan qoro heeso aan qof walba ku garan karo. La shaqeynta dadka sida Sia, William Orbit iyo, dabcan, Will.I.Am waxay ahayd waayo-aragnimo cajiib ah. Waxay dhagaysteen fikradahayga oo dhan waxayna ka caawiyeen inay u keenaan noloshooda. Waxaa jira heeso qoob-ka-ciyaaro badan oo riyaale ah oo aad u riyaaqsan, laakiin muhiim ayay igu ahayd inaan muujiyo xooggayga, dabeecadeyda iyo nuglaanshaha. Dabcan waxaan heystaa riyooyin aad u fiican. "Warqaddu waxay ku dhammaaneysaa sida soo socota:"Waxaan rabaa inaan ku tuso boggaga Britney Spears. Anigu waxaan ahay farshaxan, waxaan ahay hooy, waan ku faraxsanahay. Anigu waxaan ahay saaxiibkaaga! Waxaan ahay Britney Jean! "
Bartamihii Nofembar, qaar ka mid ah heesaha 7 ee ka soo baxa albumka soo socda ayaa laga soo dejiyey internetka. Dhawr saacadood kadib, si kastaba ha ahaatee, dhammaantood waa la tirtiray. The songs kaliya in xaday ka hor la sii daayo Rakaabka ah, ifka Morning Star (wiilal Britneyiným heegan ah) oo Allen, kuwaas oo lahaa chorus xun, kaas oo xaqiijiyay in mid ka mid ah soo saarayaasha ugu. 23. Fannaankii Nofeembar wuxuu booqday isbitaalka carruurta ee Orange County, halkaas oo carruurta lagu daweeyo kansarka. Britney waxay qaadatay sawirada qof walba, waxay gacanta ku soo dhigtay hal gooyo Ooh La La, waxaanay wareysi siisay Ryan Seacrest.
Britney Jean album la sii daayay 28.11. Norway, maalin ka dib Yurub iyo 3. December 2013 ee Maraykanka. Guddiga la kulmay qiimaynta positive iyo sidoo kale diidmo ka portals music Internet iyo Britney ayaa salka taageere weyn in markii la tiriyey in ka badan 33 million "askari". Jawaabaha ugu fiicani waxay ahaayeen heesahaTil Waa Gonesi ay uTik Tik Boom. Maqaalkani wuxuu ahaa mid ka mid ah 36 dal ee todobaadkii ugu horreeyay ee iibka aduunka.
Ilaa hadda, ficilkii ugu dambeeyay ee heesaha waa albumkii sagaalaadKu faanalagu soo saarey 2016. Dib-u-eegista iReport ma helin qiimeyn aad u wanaagsan, sida ku cad qoraaga dib-u-eegista, inkasta oo soo-saarayaashu ay ku guulaysteen inay isticmaalaan farsamooyinka casriga ah, laakiin natiijada waxay ka maqan tahay kalsoonida iyo mawduucyada xooggan.
2: Britney: Sheyga Me
4: Cirro (song)
5: Waxaan jeclahay Rock Rock 'N Roll
6: (Waxaad i Dhaweyd) Crazy
7: Ha ii ogolaan inaan noqdo Last To Know
9: Wakhti (Waxaan Fahmi doonaa)
11: Hold Me Against Me
13: Haddii U Seek Amy
14: Wakhti kasta
15: Shaqada Bitch
17: Waxaan ahay Slave 4 U
18: Mararka qaarkood
19: Oops! ... Waxan Qabtay (Song)
20: Jooji Barafka
21: Wuxuu u dhashay inuu kuu sameeyo farxad
24: Riyada gudahood riwaayad dalxiis
25: Samee Somethin '
26: Waxaan doonayaa inaan tago
27: Sun ah
28: Laga soo bilaabo Dabka Qalbigayga
29: Oops! ... Waxaan Qabtay Mar labaad
30: Aniga oo ka soo horjeeda muusikada
33: Turka Onyx Tour
35: Qeyb iga mid ah
38: Anigu ma ahan gabadh, ma ahan dumar
39: Farxad (albaab, Britney Spears)
42: Qalabka Sirta: Britney Spears
43: Lucky (song, Britney Spears)
44: Wiilasha (heesta, Britney Spears)
45: Sharaf (albaab, Britney Spears)
46: Xoojin (hees, Britney Spears)
49: ... Ilmaha Hal mar More (song)
Britney Spears, magaca oo buuxa Britney Spears Jean (* 2 1981. December McComb, Mississippi, USA) waa gabayaa ah pop American, guusha ee Grammy iyo MTV Video Music Awards, Xisbi iyo aktarada. Inta badan wuxuu noqday caan ku ah heesaha ay "... Baby One More Time", "Waan ka xunahay! ... waxaan Waxaa haddana sameeyeen", "Sunta ah", "Gimme More," "isku badbadalo," "Piece Me of", "Aamus Waxaa Me Against" "Ilaa darafyadiisa Adduunka", marti song ah "siidaynay & qayliya" heesaa American Will.i.am iyo heeso soundtrack ah in filimka 2 Smurfs ah.
Britney / Brittany waa dhacdo labaad ee taxanaha labaad, iyo guud ahaan dhacdo afar iyo labaatanaad ee taxanaha TV-American kibirsan. Dhacdo qoraal ah oo si toos ah by abuuray taxane, Ryan Murphy, waxay ahayd warbaahinta ugu horeysay 28. Sebtembar 2010 oo ku yaala kaniisadda Fox TV waxayna soo dhiibeen Britney Spears. heesta Member ,, Brittany Pierce (Heather Morris) khibradaha ilkaha ka dib markii dhalanteed suuxdinta, taas oo ay u muuqatay sida Spears in daqiiqado iyada halyeey oo mar kale ayay raaceen qaar ka mid ah xubnaha kale ee shirka. Oo nimankii gabayaaga weyn ee Rachel (Lea Michele) iyo Finn (Cory Monteith) la kulma in aad xiriir dhibaatooyinka ugu horeysay hoggaamiyaha kaniisadda, Will Schuester (Matthew Morrison) waxay noqon doontaa of a saaxiib cusub la taliyaha waxbarashada Emma Pillsbury (Jayma Mays) masayr ah, Dr. Carl Howell (John Stamos) .
Britney: Sheyga Me oo ah waxqabadka nolosha Britney Spears. Riwaayado waxay ka dhacaan Xarunta Hollywood-ga iyo Casino ee Las Vegas, Mareykanka. Dhamaan sawirada sawirada Britney Spears '.
Britney Jean waa sheekada sideedaad ee qoraaga muusiga ah ee Britney Spears. Sida rasmiga ah, 3 ayaa la filayaa inuu soo baxo. Diisambar 2013 ee Ameerika laakiin Yurub gudaheeda dhowr maalmood ka hor iyo 29. Nofeembar 2013. Gabayga heesaha ah ayaa bilaabay shaqeynta bilowga 2013. Sanadka oo dhan, Britney ayaa ku hadashay sida ay ugu weyntahay albumkeeda. Waxa kaliya ee ugu horeysay ka album ma ahaa mid aad u guulaystay track jawaan Work, kuwaas oo ku guuleystay abaalmarinta dahabka ee Maraykanka u qaabilsan iibinta nus milyan nuqulo ka mid ah hal ku. Midda labaad waxay ahayd Bakhti. Meesha ugu fiican wuxuu ahaa 76. Alba wax badan ma sameynin sababtoo ah waxay lahayd wax yar ama dhiirigelin ah. Uu meeleynta ugu fiican ee ahaa oo ku saabsan dhibic boor 4, taas oo ah meesha ugu xun iyada album iyada xirfadiisa oo dhan. daqiiqad A ka hor inta album xaday ka demo songs Rakaabka iyo taageerayaal badan ayaa xusay in vocals on kasta oo ka mid songs dhawaaqi kala duwan, iyo mar dambe qof aqoonsaday cod "kale" sida codka oo gabayaa ahaa Myah Marie, kuwaas oo ahaa vocals a 'maxkamadda' asalka Fanaanada on album this, iyo ka dib la sii daayo cusub ee vocals daaweyn ka dib markii la sii daayo ay muujiyeen in ay jiraan waxaa laga yaabaa in ka badan oo kaliya vocalist jazz ah. Codkeeda waxay u muuqataa xitaa halkaasoo aan si rasmi ah loo diiwaangelin.
Circus labaad oo ka mid ah albumka Circus of heesaha American Britney Spears. Clip ayaa telefishinnada TV-ga helay bishii Janawari. InfoBritney Spears for Clip Circus waxay ku dhowdahay maxkamad. Waxa ay sheegtay in ay ujirtay maroodiyaashii ka muuqatay xarkeedii. Britney ayaa beenisay in maroodiga ay isku dayayaan, iyo milkiilayaasha maroodiga ayaa sidoo kale beeniyay. Isla mar ahaantaana, canshuurtan, waxay xayeysiineysaa hindiso cusub oo qarsoodi ah.
Waan jeclahay Rock "N Roll waa gabay ka timid kooxda 1975 ee kooxda Anglo-Americanka. Waxay ka mid yihiin heesaha ugu caansan iyo rukunka, gaar ahaan caanaha loo yaqaan 'coverworms', gaar ahaan Joan Jett iyo Britney Spears.
(You Drive Me) Crazy waa sheekada sadexaad ee Britney Spears oo ka timid albaabkeeda koowaad ... Baby One More Time. Heesta ayaa la sii daayay intii lagu jiray rubuckii seddexaad ee 1999, kadibna waxaa lagu soo daray Horseska ugu weyn: My hodanka ah ee ugu weyn hits album.
Ha ii ogolaanin inaan ugu dambeyntii ogaado waa sheekadii afraad iyo kuwii ugu dambeeyay ee Oops album ... Waxaan sameeyey mar labaad heesaha American Britney Spears, oo la sii daayay intii lagu jiray rubuca hore ee 2001.
Meelaha laga soo galo waxaa ka mid ah albaabada afaraad ee Britney Spears oo ay sii daayaan 18. Nofeembar 2003. Iyada oo albaabkani, waxay dib ugu soo celisay dadka caanka ah ee la yiraahdo Everytime iyo Toxic, kuwaas oo sidoo kale ku jiray saldhigga Maraykanka. Codka Britney Spears waa mid ka duwan kan ka horeeya albumyadii hore ... Baby One Time More, Oops! ... Anigu waxaan mar kale ku sameeyay Britney.
Maalin maalmaha (I garan doontaa) One (fahmo) gabay by Britney Spears sii daayay inta lagu guda jiro Saddex biloodkii saddexaad ee sannadkii la soo 2005.Informace písniSong Britney qoray laba todobaad ka hor ayay bartay iyada uurka leh wiilkeedii ugu horeeyay, Sean Preston. Spears diiwaan song oo dhan on biyaano oo keliya, shaqada sida soo saare ah oo ku saabsan daryeelka Guy Sigsworth, oo sidoo kale soo saaray Everytime.
Britney 2.0 waa ciyaar ballaaran oo ka mid ah taxane telefishanka American Glee. Waxay ka kooban tahay sideed sheeko oo ka soo jeeda afartii qaybood ee hal magac oo isku mid ah, taas oo ahayd dhacdadii labaad ee bixisay Britney Spears fanaan. EP wuxuu ka kooban yahay lix heeso iyo laba mashuuc oo heesaha Spears, laga bilaabo albaabkeeda ugu horeeya ... Ilmaha Hal Ilmooga ah oo dheeraad ah si uu fasaxeeda fasalka toddobaad Femme Fatale. EP waxaa la sii daayey oo keliya digitally.
Hold I Against Me waa sheeko ay heesto heesaha caanka ah ee Britney Spears. Sheekadani waxay ku jirtaa albaabkeeda fasalka toddobaad. Waxsoosaarka ayaa la qaaday Dr. Luke iyo Max Martin. Heesta isla markiiba soo baxay kaalinta koowaad ee Canada, Belgium, Denmark, New Zealand, laakiin sidoo kale in boor. Taasu waa hal Britney Spears afraad, kuwaas oo isla markiiba qabsadeen sare ee gooldhalinta iyo mahad oo gabayaa ahaa noqday artist labaad ee taariikhda, kuwaas oo maamula si ay u sii hal hogaanka on sare ee gooldhalinta dhowr jeer. Farshaxankiisii ​​koowaad wuxuu ahaa saaxiibka Mariah Carey.
Britney wuxuu noqon karaa: Britney Spears, muusikada AmericanBritney (album), 2001Britney: Diiwaanka, qoraal ka soo 2008
Haddii U Seek Amy (Qof kasta oo doonaya Amy) waa heesada seddexaad ee ka soo baxa fanaanada Circus Britney Spears. Sheekada waxaa sii daayay 10. Maarso 2009.Videoklip
Wakhti kasta waa gabay qoraal ah oo ay sii daayaan muusikada American Britney Spears. Singl waxa ay ka muuqatay albasheeda loogu yeeray In The Zone.Videoclip Agaasimaha David LaChapelle sameeyey cajalad fiidiyow ah oo muran badan oo loogu talagalay heesadaan. Marka ugu horeysa ee aan la daabicin, Britney Spears waa in ay ka badan tahay kaniiniyada, cabbitaanka khamriga, oo u dhinta qiyaas ka badan. Laakiin dibadbaxyada taageerayaasha iyo dadweynuhu waxay ku qasbeen inuu ka dhigo midda labaad ee loo dulqaadan karo. Hase yeeshee, waxaa jira laba caravans ah, Maraykanka waa mid aad u liita marka loo eego saboolka adduunka, waxaana jira dhiig yar.
"Work Bitch" waa heesaha heesaha heesaha ah ee Britney Spears oo ka soo jeeda filimkeeda "Britney Jean" oo siddeed sano ah. Qoraalkii Britney iyo heesaha ayaa ka ciyaaray hal keliya. Heesta ayaa ka caawiyay qorista iyo soo saarida soo saaraha Mareykanka iyo xubin ka mid ah Black Eyed Peas, will.i.am. Shaqada Bitch ayaa mar hore ka baxsatay 15 internetka. Sebtembar 2013 iyo sidaa darteed Britney ayaa go'aansaday in ay sameeyaan raadiyaha rasmiga ah isla maalintaas. Codka waxaa lagu duubay VEVO daqiiqado yar ka dib markii la sii daayay raadiyaha. On iTunes, hal ayaa waxaa loo heli karaa 16. Sebtember 2013. Dhowr saacadood ka dib markii la sii daayay, dadka keligood ah ayaa helay sare ee iTunes 40 dal.
Womanizer waa hal sawir oo ka mid ah muxaadaro Britney Spears 'lixda studio album, Circus, oo la sii daayay Sebtembar 2008. Womanizer ayaa ku celceliyay guusha koowaad ee fanaankan ... Ilmaha Hal mar More.
Waxaan ahay Slave 4 U (Waxaan ahay addoon ah) waa heeskii ugu horeeyay ee Britney Spears oo ka yimid Britney Spears. Heesta ayaa la sii daayay seddexdii bilood ee ugu dambeeyay 2001 Heerkani waxaa badanaa loo arkaa marxaladda xigta ee fanaankan, sida uu u socdo wareegga R & B. Fiidiyowgu wuxuu sidoo kale u guuraa Britney wax yar oo ka sii fog oo ka leexday sawirka bikrad ah iyo gabar albaabbada xiga.
Mararka qaar waa sheekada labaad ee heesaha caanka ah ee Britney Spears oo laga sii daayay albaabka hore ee ... Ilmaha Hal mar More Time.Information oo ku saabsan heestii SongThe song la sii daayay intii lagu jiray rubuca labaad ee 1999. Qoraal iyo soo saaray Jorgen Elofsson, oo helay abaalmarinta BMI ee gabaygan ee 2000 ee Heesta Sare ee ugu wanaagsan ee Sannadka.
Oops! ... baan ku sameeyey, Haddana (Oops, inaan mar kale ku sameeyey) waa song ugu horeysay ka album isla American Britney Spears, kuwaas oo u muuqday in písniPíseň 2000.Informace ku qoran oo la soo saaray by Max Martin iyo Rami. song qoob waxa uu leeyahay lyrics ayaa muujinaya qayb ka mid halis ah Britney by isagoo saaxiib aad qabtid in gabaygii kaliya ciyaaro. song Tani waa mid ka mid ah sifeeyay ugu Fanaanada this iyo mid ka mid ah ay ugu guulaha badan xirfadiisa noqday.
Burburiyo barafka waa 3. hal xagayaga 5. ka mid ah albaabada studio Blackout ee heesaha caanka ah ee Britney Spears. Bishii Maarso, video clip ayaa sidoo kale la sii daayay, iyada oo taageerayaal badani aysan qarin karin cabsigooda. Ma aysan ciyaarin Britney, sida aynu u adeegsanay, laakiin waxay u muuqataa isbeddel maskaxeed, oo la dagaallama sharka.
Wuxuu ku dhashay inuu kugu farxo waa heesaha afraad ee Britney Spears laga bilaabo markii ugu horaysay ... Ilmaha Hal mar More. Heesta ayaa laga sii daayay Yurub iyo Kanada muddada rubuckii afraad ee 1999.
Britney 2.0 waa qaybta labaad ee taxanaha afraad ee taxanaha muusikada muusikada Mareykanka ee Glee iyo guud ahaan rubuca lixaad ee taxanaha. Waxaa qoray Brad Falchuk, oo uu hogaaminayey Alfonso Gomez-Rejon waxaana markii ugu horeysay lagu tijaabiyay Maraykanka 20. September 2012 oo ku yaala Channel TV. Tani waa dhacdadii labaad ee lagu dabaaldego sida Britney Spears. Xilligaas, xiddiga martida ah ee gaarka ah Kate Hudson ayaa u muuqda sida Cassandra July, macalinka qoob ka ciyaarka Rachel.
Badbaadinta ayaa ah sheeko ay samaysay Britney Spears, kaas oo la sii daayay sida labaad ee albaabka saddexaad ee loo yaqaan Britney. Heesta ayaa la sii daayay intii lagu jiray rubuca hore ee 2002.
Riyada Hudheel Riti waa booqashada saddexaad ee konserka ah ee heesaha caanka ah ee Britney Spears. Waxay ku taallay taageeradii ay ku lahayd albaabka saddexaad ee Studio, Britney. 1 ayaa bilowday. Nofeembar 2001 oo ku dhamaaday 28. July 2002. Socdaalkan waxaa lagu qabtay Waqooyiga Ameerika oo kaliya hal show wuxuu u tagay Aasiya iyo Japan.
Ma Somethin '(Ma wax) waa gabay Britney Spears, kuwaas oo sida ugu fiican album Greatest Hits yimid: My Prerogative.VideoklipRežie clip this weerarkii doonaa qaaday Britney nafteeda, laakiin si ay u caawiyaan aadan sidii si fiican ugu yeedhi qof ka badan oo khibrad leh, iyo Billie Woodruffa.V Cinwaanka waxaa lagu sameeyaa ciyaaro kale. Britney waa in clip u muuqdo ah oo cirka jooga, kooxda, at bar ah, laakiin dabcan ka dambeeya makarafoonka. In December 2005 clip this ayaa lagu dhawaaqay in sida ugu xumaa ee clip ah, taas oo ah Britney dhacay markii saddexaad ee uu mustaqbalkiisa.
Waxaan doonayaa in aan galo saddexda kali ee Femme Fatale album by heesaha Britney Spears. Sheekada waxaa sii daayay 13. Juun 2011. Wax soo saarka waxaa soo saaray wax soo saare Max Martin, Shellback.
Sunta ah (sunta) waa gabay Britney Spears ka album afaraad In Zone ah, kaas oo helay Grammy abaalmarinta haybadda wayn. Heesta la sii daayay inta lagu guda jiro bilood ee hore ee sanadka 2004.Informace písniPíseň soo saaray The Bloodshy iyo avant, kuwaas oo ku tilmaamay song sidii James Bond gudbeen la Bollywood filmem.Píseň ku saabsan yahay dhacaya jacayl, marka aan dareemayaa in aan ka koobanahay dhibbane, iyo jacaylka waa daroogada. taas oo saameyn ah sida sigaarka ama alkohol.VideoklipRežie clip qaaday Joseph Kahn, laakiin script laftiisa clip Been abuurtay Britney oo ka mid ah videos music ugu qaalisan historie.Klip bilaabmaa on diyaarada, halkaas oo Britney ayaa ka shaqaynaysa sidii midiidinka diyaarad. Musqulaha kulmay nin waayeel ah oo uu bilaabo inuu dhunkado, muddo ka dib waxa uu jiidayo maaskaro iyo xado uu jeebka klíč.Část markii Britney ayaa timaha iyo dharka maqaar cas oo lagu toogtay jidadka Paris. Markan, Britney waxay ku jirtaa muuqaal aan cabsi lahayn oo dabka iyo amniga badanaaba way qaban kartaa.
Laga soo bilaabo Dhibaatada My Qalinkayga Qalinkayga waa midda shanaad iyo kan keliya ee laga soo daayey Britney Spears 'debut album' ... Ilmaha Hal mar More. 15 ayaa la sii daayay. Diisambar 1999 ee Australia iyo USA, kadibna 2000 ayaa sidoo kale ku yaala Czech Republic.
Hoobiyayaal ... Waxaan Qabaa Mar labaad waa albumkii labaad ee muusikada American Britney Spears. Albaabka waxaa la sii daayay 16. May 2000 oo mar labaad noqday mid aad u guuleysatay. Xitaa xitaa muusigga muusikada ayaa bilaabay inuu dhadhamiyo muusikada Britney Spears, sidaas darteed dib u eegista buuggan ayaa badiyay wax badan.
Me Against The Music waa heesaha ugu horeeya ee Britney Spears 'Songwriter Ameerika ah. Heesta ayaa la sii daayay intii lagu jiray rubuca afaraad ee 2003. Britney ayaa heestan sheeko la wadaagtay Madonna.
M + M's Tour waa booqashada shanaad ee xafladaha muusikada Britney Spears. Lix lixda riwaayadood ayaa lagu qabtay kaliya kooxaha naadiyada Mareykanka. 1 ayaa bilowday. May 2007 oo la joojiyay 20. May 2007. Bandhiga ayaa socday oo kaliya daqiiqado 12-16 iyo Britney heesay heesaha oo ku dhowaad dhaansadeen. Bandhigga ayaa lagu iibiyay daqiiqado, laakiin haddii kale waxaa lagu dhaleeceeyay si xunxun.
My Prerogative waa layladda Britney Spears oo ay daabacday 2004. Sheekada asal ahaan waxaa qoray Bobby Brown.VideoklipKlip waxaa hogaaminayey Jake Nava, oo guursaday ninkeeda dambe Kevin Federlin. Fiidiyowgu wuxuu ahaa wakhti kale oo ay Britney magazine Rolling Stone magazine u tahay sida ugu fiican Clip of Year of 2004. Si daacadnimo ah, server-ka Muchmusic wuxuu ku dhawaaqay fiidyowga ugu xumaa isla sannadkaas.
Onyx Hotel Tour waa booqashada afaraad ee xafladaha muusikada American Britney Spears. Waxay taageertay kaalinta afraad ee naadiga Studio-ga. 2 ayaa bilowday. Maarso 2004 iyo 6 inay dhammeeyaan. Juun 2004, sababtoo ah dhaawaca jilibka ee Britney halka lagu toogtay cajalad fiidiyoow ah. Bandhigyada 37 ee Waqooyiga Ameerika waa in la joojiyaa. Dalxiisku wuxuu ka dhacay Waqooyiga Ameerika iyo ka dibna Europe.
Hoos-u-dhac ayaa ah sheekada afraad iyo kan ugu dambaysa ee Albaabka gudaha, oo ay heesayaan Britney Spears. Hal ilmo ayaa la sii daayay seddexdii bilood ee seddexaad ee 2004 Warbixin ku saabsan heesaha 'Outrageous' waxaa soo qoray oo soo saaray rikoodhkii loo yaqaan 'R & B' ee R. Kelly, kaas oo aan ku maqli karno heesaha heesahan. Qoraalka gabaygan wuxuu rabay Britney in lagu qoro, waxaana u jeeday in wax kasta oo ay sameysay ay ahayd wax laga yiraahdo.
Piece of Me waa fanaankii labaad ee Britney Spears oo ka soo jeeda 5. Albaabada albumka Blackout. Fanaankii ayaa la sii daayay bishii Janaayo 2008.VideoklipVideo si heesta loo toogtay 27. iyo 28. Bishii Nofeembar ee Hollywood Nightclub ee Hollywood iyo filim qaadashada fiidiyowga 500 000 $. Agaasimaha fiidiyowga waa Wayne Isham, oo la shaqeynayay Britney horaantii ku dhuftay I ma ahan gabadh, oo aan weli iyo haweeney. Fiidiyowgu wuxuu lahaa hindise gaar ah oo 14 ah. Bishii Maajo.
meeshu waa eraygii uu leeyahay dhowr macne: rogadka (sport qadiimiga) - sportovištěcirkus Roman - podnikMoták madadaalada reer guuraaga (panulirus) - Marsh, panulirus ka mid ah shimbiraha ugaadha in jestřábovitýchCircus qoyska - magaalooyinka Ingiriisi square wareega tvaruOxford rogadka - rogadka LondýněPiccadilly ah - tahay Londýněnázvy ku dělCircus (album Britney Spears) - Britney SpearsCircus album (song) - Britney song SpearsPsycho rogadka - album Kiss ee sannadka 1998Circus Live - muusikiiste album John Cale erayga 2007podobná
Gimme More waa hal tijaabo oo ka mid ah shanta xiddig ee loo yaqaan 'Blackout' by Britney Spears, oo la sii daayay Sebtembar 2007. Singl wuxuu soo saaray Danja waxaana ah kan labaad ee ugu fiicnaa heesaha Britney Spears ee heesaha ... Ilmaha Hal mar More.
Anigu ma ahan gabadh, oo aan weli ahayn iyo haweeney, waa sheekada saddexaad ee Britney Spears oo ay soo saarto Britney Spears. Heesta ayaa la sii daayay rubuca hore ee 2002.
Blackout waa buugga shanaad ee studio ah ee heesaha American Britney Spears. Albaabka waxaa la sii daayay 29. Oktoobar ee Europe iyo 30. Oktoobar 2007 ee Maraykanka. Waa sheeyada koowaad ee studio oo ku jirta maaddo cusub tan iyo albaabka Aagga Zone ee 2003.
Circus waa lixda buug ee studio ee heesaha American Britney Spears. 28 ayaa marka hore u muuqatay. Nofeembar 2008 diiwaanka Jive, toddobaadka markii Spears dabaaldegay dhalashadooda. Muuqaalku waa isku dhafan Isku-daboolista cayaaraha "Electropop and Blackout". Waxaa sidoo kale la siin qiimaynta positive by dhaleecayn music, oo ka dib markii uu sii daayo la siiyey on ugu horeysay oo arinkii boor 200 - Spears noqday fanaanada ugu da'da yaraa ee taariikhda, kuwaas oo 5 album waxaa kaalinta gooldhalinta kaalinta koowaad, si ay u diiwaan gashan galay Guinness Book of Records.
Femme Fatale waa sheekada fasalka todobaad ee muusiga Britney Spears, oo lagu sii daayay 25. Maarso 2011. Femme Fatale ayaa gaadhay heer sare ee jadwalka, sameynta Britney Spears oo is guursaday Janet Jackson iyo Mariah Carey, kuwaas oo ah farshaxanada leh tirada ugu badan ee albums ee Maraykanka. Sida laga soo xigtay dadka booqda bogga MTV, Femme Fatale waa albumka ugu fiican sanadka 2011.
The Circus Starring: Britney Spears (badanaa loo yaqaano Circus Tour oo keliya) waa safka lixaad ee munaasabadda Britney Spears. 2009 waxaa lagu qabtey taageerada sheekada lixaad ee studio, Circus. Socdaalku wuxuu bilowday March 2009, intii lagu jiray bilihii Maarso-Maajo, 37 wuxuu ku sameeyey Maraykanka iyo Kanada. Qaybta labaad waxay ahayd 2009 ee Yurub (22 riwaayadaha) intii lagu jiray bilihii Juun iyo Juulay, iyo 24 waxay muujinaysaa Maraykanka iyo Kanada ayaa la qabtey bishii Agoosto iyo Sebtembar. 14 riwaayado Australiya ah ayaa lagu soo gabagabeeyay November 2009. Tani waxay ka dhigan tahay booqashadii shanaad ee 2009 ee ugu faa'iidada badan sannadkan, iibinta wadarta 135 Milyan Dollar, waxay ahayd safka lixaad ee ugu weyn ee farshaxanka haweenka ee taariikhda. Bandhigga Madison Square Garden waxaa laga iibiyay sanadaha 8.
Lucky waa sheekada labaad ee ka timid guddiga labaad ee Britney Spears. Sheekada waxaa la sii daayay saddexda sadexaad ee 2000. Warbixin ku saabsan heesaha SongThe song waxaa la qoray oo mar kale soo saaray Max Martin iyo Rami. Qoraalku wuxuu ku saabsan yahay actress sida muuqata farxad leh sababtoo ah waxay leedahay lacag, ammaan, qurux, laakiin dhab ahaantii waa xaqiiqda dhabta ah.
Wiilasha waa sheekada ugu dambeysay ee Britney Spears oo ka timid albaabka saddexaad ee loo yaqaan 'Britney'. Heesta la sii daayay inta lagu guda jiro Saddex biloodkii saddexaad ee sannadkii la soo 2002.Informace písniPíseň qoraal ah oo soo saartay Neptunes iyo la sii daayey qaab remixed, la Britney iyo xubin ka mid ah ayaa Neptunes Pharrell Williams gabyaya. Heesta ayaa sidoo kale ahaa Austin Powers.
Glory ayaa ah muusigga sagaalaad ee qoraaga muusiga ah ee Britney Spears. 26 ayaa la sii daayay. Agoosto sanadka 2016 (RCA Records). Midda kowaad ee albaabka "Make Me ...", oo qayb ka ahaa G-Eazy, ayaa horeyba u soo bandhigay 15. July 2016. Albaabku wuxuu sidoo kale soo baxayaa qayb gaar ah oo lagu soo koobi doono shan heeso oo kale.
Xoog (xoog) waa gabaygii labaad heestii Oops! ... aan ugu sameeyey Fanaanada Mar American Britney Spears. Heesta la sii daayay inta lagu guda jiro quarter afraad ee 2000.Informace of písniPíseň qoraal ah oo soo saaray saarayaasha maxkamadda American Max Martin iyo Rami. Sheekadani waxay ku saabsan tahay in ay ka gudubto dhibaatooyinka xiriirka iyo sheegashada in ay ka xoog badan yihiin ka hor.
"Ooh La La" waa sheeko ay heesto heesaha Britishka Britney Spears. Sheekadani waxay ka timid filimka 2013 Smurf 2. Waxaa qoray qorayaasha sida Max Martin, oo la shaqeeyay Britney sanadihii hore. Inkasta oo nooca demo laga sii daayay dhowr toddobaad kahor intaan la sii daayay, 17 ayaa sii daayay falkeeda. June 2013 oo ku taala raadiyaha KIIS FM, halkaas oo Britney ay wareysi la yeelatay kaliya oo ku saabsan heesaha cusub, laakiin sidoo kale ku saabsan heesaha soo socda iyo ku dhaqanka Las Vegas. 11.7 ayaa soo baxay. 2013, iyo laba maalmood waxay ka badan tahay 7 malaayiin aragtiyo.
Britney waa albumkii saddexaad ee muusikada caanka ah ee Britney Spears oo sii daayay 6. Nofeembar 2001. Sheekooyin yar oo ka yimid buuggan ayaa ka muuqday heesaha filimka loo yaqaan Crossroads. Albaabka Britney wuxuu ahaa mid guuleysta, laakiin ma aysan gaarin caan ka mid ah labadii gabdhood ee hore ... Baby One Time More and Oops!
... Baby One Time More Time waa heesaha ugu horeeya ee heesaha muusikada caanka ah ee Britney Spears oo iyadu ka soo bixisay rikoorka ugu horeeyay ee magaca isku midka ah ee ku jira rubuca afaraad ee 1998.